Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » SKAL hifidy Filohan'ny Tontolo Vaovao: Hihaona amin'i Burcin Turkkan, Tiorka-Amerikana Voatosika handray ity Fanamby ity
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Video
Burcin Turkkan, Kandidà Filoha Eran-tany ao amin'ny Antoko Krismasy SKAL Orlando
Ny SKAL dia momba ny fisakaizana eo amin'ireo matihanina amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerana izao tontolo izao. Mikasika ny firafitry ny famelabelarana avo lenta ho an'ity fikambanana ity ihany koa izany. Mijanona amin'ny filohan'izao tontolo izao ny vola. eTurboNews dia mihaona amin'ny kandidà tokana amin'ity asa ity, Burcin Turkkan.
Ny SKAL dia momba ny fanaovana raharaham-barotra amin'ny namana.
Any amin’ny firenena 102 eran-tany ireo namana ireo.
Miezaka mahazo vato fanamafisana 55% ilaina amin'ny 10 Desambra amin'ny fivoriambe virtoaly SKAL virtoaly ho avy amin'ny herinandro ho avy ho filohan'ny fikambanana maneran-tany ny Amerikana/Tiorka iray.
Burcin Turkkan no filohan'ny SKAL USA teo aloha ary miezaka ny hahazo ny vato ho lasa Filohan'ny Fikambanana Manerantany manaraka.
Natosiky ny traikefan’izy ireo sy ny finamanana iraisam-pirenena tsara nipoitra tamin’ireny dia ireny, ny vondron’olona matihanina notarihan’i Jules Mohr, Florimond Volckaert, Hugo Krafft, Pierre Soulié, ary Georges Ithier, dia nahita ny Club Skål tao Paris tamin’ny 16 Desambra 1932.
Nitombo ny hevitra momba ny fisakaizana iraisam-pirenena eo amin'ireo Matihanin'ny fizahantany, ary tamin'ny fiandohan'ny taona 1934 dia efa nisy Club 12 niforona tany amin'ny firenena dimy. Teo no nipoiran’ny hevitra hanangana fiaraha-miasa, izay mampivondrona ny klioba rehetra, mikendry ny hampiroborobo ny fiaraha-mientana sy finamanana eo amin’ny sehatry ny Fitaterana sy Fitaterana maneran-tany.
Ny 'Association Internationale des Skål Clubs' (AISC) dia niorina tamin'ny 28 Aprily 1934 tao amin'ny Hotel Scribe any Paris, tao amin'ny fivoriambe iray ahitana solontena 21, solontenan'ny klioba 11, miampy mpanara-maso roa avy any Londres, izay niara-nifidy ny Komity Mpanatanteraka. , teo ambany fitarihan'i Florimond Volckaert:
Androany mihoatra ny 12923 ny mpikambana, tafiditra amin'ny mpitantana sy mpitantana ny indostria, mihaona amin'ny sehatra eo an-toerana, nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena mba hanao raharaham-barotra amin'ny namana mandritra ny mihoatra ny 318 Skål Clubs.
Ny vondrona fototra ao amin'ny Skål International dia ny Club, izay miasa ho toy ny fifandraisana amin'ny Skål International amin'ny hetsika Skål ao anatin'ny sisin-tany ara-jeografika ny Club.
ankehitriny eTurboNews Ny Breaking News Show dia nanatevin-daharana ny klioba SKAL Orlando, Florida tamin'ny fankalazana ny Krismasy SKAL niaraka tamin'ny Burcin Turkkan manatrika..
Burcin Turkkan hoy izy:
Ry namako Skalleague,
Tombontsoa ho ahy ny nanompo tao amin'ny Birao Mpanatanteraka Iraisam-pirenena Skål amin'ny maha-Tale anao sy Filoha Lefitra Zokiolona anao nandritra ny 2 taona lasa. Amin'ny SI AGA ho avy hotanterahina ny 10 Desambra 2021 amin'ny 5 ora maraina CET dia milatsaka hofidiana ho Filoham-pirenena iraisam-pirenena Skal manaraka aho. Toy ny mahazatra dia mankasitraka ny fanohanana feno sy ny fahatokisanao ahy aho ary hanohy ny fanompoanareo amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fisakaizana sy Skal.
Desambra 6, 2021 amin'ny 09:33
Blaogy tena tsara Nahafinaritra ahy ny namaky azy Azafady mba zarao fampahalalana bebe kokoa izay mendrika ny famakiana azy ary ny fitarihana manam-pahaizana dia tsy maintsy ilaina amin'ny orinasa fanombohana mba hahafahanao mifandray aminay !!
Desambra 6, 2021 amin'ny 04:54
Misaotra betsaka tamin'ny fampiroboroboana ny Skal.
Maniry ny hihaona aminao amin'ny alàlan'ny Skype na Zoom!
Ny anao amin'ny fizahantany
CETINAY AKSOY hoy:
Desambra 5, 2021 amin'ny 15:58
Mpikambana ao amin'ny Izmir/Turkey SKAL aho. Araka ny lalàm-panorenana, tsy misy antony tsy tokony hifidianana an'i Burçin TÜRKKAN, ilay hany kandidà. Manohana azy amin’ny fo manontolo aho.
Desambra 5, 2021 amin'ny 09:09
Te-hankasitraka ny. Filohan'ny Skål International. Council, Bernard Whewell, izay mipetraka ao amin'ny Komity Mpanatanteraka. Fandaharana farany Fampidirana ny tranokalan'ny Terminology fidirana haingana avy amin'ny ICS Search ary mijery ny teny continence sy ny famaritana azy.